Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo ka Qeybgalaya Caleema-saarka Baarlamaanka Jubbaland[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo ka Qeybgalaya Caleema-saarka Baarlamaanka Jubbaland[Sawirro]
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 4-5-2015 ka soo ambabaxay magaalo madaxda Puntland ee Garoowe isagoona ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland oo ay ka dhacayso xafladd balaaran oo loo dhigayo xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubbaland.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliya Wasiiro iyo xildhibaan katirsan Baarlamaanka Dawladda Puntland, waxaana ay safarkooda ku hormareen magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyey maamulka degmada iyo kan Gobolka Mudug ee Puntland.
Madaxweyne Camey ayaa saacadihii koobnaa ee uu joogay magaalada Gaalkacyo kormeeray xarunta taliska ciidanka birmadka Gobolka Mudug oo ay saameyn xoogleh ku yeesheen roobabkii ka da’ayey magaalada Gaalkacyo iyo goobo kale oo muhiim ah oo saameyn roobku ku yeeshay, waxaana uu shacabka reer Puntland iyo Hay’addaha caalamiga ah ee ka howlgala Puntland madaxweyne Camey ka dalbaday in ay ka qeyb qaataan gurmadka loo fidinayo xarumaha uu roobku saameeyey ee Gobolkaasi.
Intaas kadib ayaa madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Camey iyo wefdigii uu hogaaminayey ka duuleen garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo iyagoona si nabad ah ku yimi gelinkii dambe ee maanta magaalada Kismaayo ee xarunta dawladd Goboleedka Jubbaland.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubbaland , wasiiro iyo xildhibaano katirsan Dawladda Jubbaland, haween , dhalinyaro, masuuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ayaa si habsami leh Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Camey iyo wefdigii uu hogaaminayey ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo.
Soo dhaweyn kadib ayaa madaxweynaha iyo dhammaan wefdigaba loo galbiyey aqalka madaxwtooyada Jubbaland waxaana halkaasi si diiran madaxweyne Camey ugu soo dhaweeyey Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe.
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa madaxda iyo shacabka reer Jubbaland uga mahadceliyey soo dhaweynta balaaran ee ay u sameeyen , saxaafadda qeybaheeda kala duwan ayuuna u sheegay in Kismaayo uu uyimi sidii uu uga qeyb-geli lahaa xafladda caleemasaarka hogaanka iyo xildhibaanada cusub ee Jubbaland.